ဧရာညီနောင်: Device ဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်...
Device Manager ဆိုတဲ့ အတိုင်း Device များကို ထိန်းသိမ်း ပြုပြင်ရာမှာ အကောင်းဆုံး Tool ပါ အမှန်တကယ်သာ အသုံးချ တက်မယ်ဆိုရင် Device&Drive ဆိုင်ရာပြသာနာ များကိုလွယ်ကူချောမော စွာဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ် ..ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုနေကြသူတိုင်း “Device Error Messages “ များကို တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်းတော့ တွေ့မြင်ဘူးကြမှာပါ ဒီလို Error Messages လေးတွေပေါ်မှာ အခြေခံပြီးတော့Device ဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်း ထိန်းသိမ်း နည်းကို ဆွေးနွေးသွားပါမယ် ..ပထမဆုံး အဆင့်ကတော့ Hardware တွေကို ထိန်းသိမ်းပြုပြင် ပေးမဲ့ နေရာလေးကို သွားကြရအောင်window logo key နဲ့ F1 ကို တွဲနှိပ်လိုက်ပါ Help and Support Center ကျလာပါမယ် Fixingaproblem ကိုက်ညီမဲ့ ဟာကို ရွေးချယ်ပြီး သူရဲ့ အစီအစဉ် လမ်းညွန်လေးတွေ အတိုင်း လုပ်ဆောင် သွားယုံပါပဲ“ Help and Support Center “ ရဲ့ အားသာချက်ကတော့ E book များလို ရှင်းပြရုံသာမကလိုအပ်တဲ့ tools တွေဆီကို တိုက်ရိုက် လင့်ခ် လုပ်ပေးထားလို့ အတော် လေးကို လွယ်ကူ အဆင်ပြေ ပါတယ်Device တွေမှာ ပြဿနာ တစ်ခု ခု ရှိနေပြီဆိုရင် ကာလာ တစ်မျိုးမျိုး နဲ့ပြလေ့ ရှိပါတယ် လက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ရအောင် Device တွေရဲ့ ပင်မထိန်းချုပ်တဲ့ နေရာဖြစ်တဲ့ Device Manager ကို Run မှာ devmgmt.msc လို့ရိုက်ထည့်ပြီး ခေါ်ယူလိုက်ပါ အ၀ါရောင် Exclamation point လေးနဲ့ ပြသနေတာကတော့ Device မှာ ပြဿနာတစ်ခု ခု ရှိနေတယ် အငြင်းပွားစရာလေးတွေ ရှိနေတယ် ဆိုတဲ့ သဘောပါအနီရောင် “X” နဲ့ပြသနေရင်တော့ သေချာပါတယ် Device ကို Disable လုပ်ထားလို့ပါ အပြာရောင် “ i “ လေးနဲ့ ပြနေတာကတော့ Device ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း ဖွဲ့စည်းပုံများကို Change (or) Modifyလုပ်ထားတဲ့ Information ပါ ဒီအပြာရောင် “i” လေးကတော့ တစ်ခုကို နှစ်ခုရွေးကြည့်နေ တဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ ပဲပေါ်ပါတယ် တစ်ခုကို နှစ်ခုကို ကြည်တယ်ဆိုတာက View Menu လေးကို အသုံးပြုပြီးတော့ “Resource by type” or” Resoure by connection” ဆိုပြီး ကြည့်ရှုခြင်းမျိုးကို ဆိုလိုပါတယ်အတွေ့ရအများဆုံး ကာလာဖြစ်တဲ့ အ၀ါရောင် “ ? “လေးနဲ့ Problem ပြနေရင်တော့ Device ကို double-click လိုက်ပါError mesaage နဲ့ ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေကို ပြောပြနေပါလိမ့်မယ် General tab\_Troubleshoot ကို click လိုက်ပါ ကူညီပါရစေ( Help and support center) ကိုရောက်လာပါမယ် “ I’m havingaproblem with my …. ….” ဆိုတဲ့ စာကြောင်းကို Check ပေး ပြီး ရှာဖွေလိုက်ပါ လူတိုင်း အလွယ်တစ်ကူနားလည် နိုင်တဲ့ Instructions လေးတွေ ပေးပါလိမ့်မယ် Instructions များအတိုင်း Step by Step ပုံမှန်လုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေသွားပါပြီ သာမန်ပြဿနာလေးတွေကတော့ဒီနေရာလေးမှာပဲအဆင်ပြေသွားတက်ပါတယ်ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမှာ ကတော့မေးခွန်းထဲမှာ အဖြေရှိဆို သလို Error Message များ ရဲ့ Information ကိုလိုက်ပြီး ဘယ်လို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း မှု့တွေ ပြုလုပ်နိုင် မလဲဆိုတာ ပါ ဖြစ်ပေါ်တက်တဲ့ error codes,messages တွေနဲ့ ဖြေရှင်းနည်းတွေကို လိုက်ပြီး အောက်ပါ အတိုင်း အမှတ်စဉ် (၄၅) နဲ့ ဆွေးနွေး ပြောကြား သွားပါမယ်
1. “ This device is not configured correctly “
ဒီ မက်ဆေ့ကို တွေ့ရပြီး ဆိုရင်တော့ Drivers ကို Hard Update wizard ကို အသုံးပြုပြီး Update သာ လုပ်လိုက်ပါ(properties\_drive\_Update driver) ဒါကနည်းလမ်း (၁) ပါ နည်းလမ်း(၂)ကတော့
2. “The dvice loader(s) for this device could not load the device driver “
အမှတ်စဉ် (၁) မက်ဆေ့အတိုင်း ပါပဲ remove လုပ် ပြီးရင် install ပြန်လုပ် ဒါမှအဆင်မပြေရင် Update လုပ်ပါ
3.”The driver for this device might be corrupt or your system may be running low on memory or other resources”
My computer ကို right click လုပ် properties ဘာပြဿနာလဲဆိုတာ မြင်ရပါပြီ RAM နည်းနေလို့ပါ RAM ပိုမို စိုက်လိုက်ခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်ပါပြီ RAM မစိုက်ချင်သေးဘူးဆိုရင်တော့ အပေါ်က အချက်တွေလိုပဲ Update\_Remove\_Add ဒါမှမဟုတ် Troubleshotting wizard နဲ့ကြိုးစားကြည့် နိုင်ပါသေးတယ်
4.”This device is not working properly because one of its drivers may be bad ,or your Registry may be
Update\_Remove\_Add နဲ့ဖြေရှင်းနိုင် ပါတယ်
6. ”Another device is using the resources this device needs”
Properties ကို Click လိုက်ပါ
8. ”Code 8 has many error messages associated with it”
11.”This device cannot find enough free resources that it can use .”
ဒီပြဿနာကိုတော့ Troubleshoot ကို click ပြီး troubleshooting wizard ကို Run ခြင်းအားဖြင့်ဖြေရှင်းပါ
12.”This device either ie not present,is not working properly or does not have all the drivers installed.”
Detect hardware ကို click ပါ ၊ အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုရင် Remove\_Addလုပ်ဖြင်အားဖြင့်ကြိုးစားနိုင်ပါသေးတယ်
ကွန်ပျူတာကို Restart ချလိုက်ပါ
Troubleshoot ကို click ပြီး troubleshooting wizard ကို Run လိုက်ပါ
16. “The driver information file is telling this child device to usearesource that the parent device does not have or recognize.”
Detect hardware ကို click ပါ ပေါ်လာတဲ့ button အခြေအနေပေါ်မှာ မူတည်ပြီး လုပ်ဆောင်သွားရမှာပါ
Device Manager ကို အသုံးပြုပြီး Remove လုပ်လိုက်ပါ control panel မှ Add new Hard wizard နဲ့ ပြန် run လိုက်ပါ
ဒီအဆင့်လုပ်ဆောင် ပြီးတဲ့ အချိန်ထိ ကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်သေးဘူးဆိုရင် Update လုပ်လိုက်ပါ
Device Manager ကို ဖွင့်လိုက်ပါ IRQ တစ်ခုထဲမှာ ပဲနောက်ထပ် device တစ်ခုသုံးထားသလားဆိုတာကို စစ်ဆေးကြည့်ပါ ဟုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ Device ကို Disable ပေးလိုက်ပါ တကယ်လို့များ IRQ မှာ နောက်ထပ် device တစ်ခုသုံးထားတာကို မတွေ့ဘူးဆိုရင် Config.sys (or) Autoexex.bat မှာ drivers ကိုရှာပြီးတော့ disable ပေးလိုက်ပါ
ပြန်စမ်းကြည့်လိုက်ပါဦး ဒါမှ အဆင်မပြေသေးဘူး ဆိုရင်တော့ Update သာလုပလိုက်ပါတော့
Restart ချ လိုက်ပါ..
Troubleshooting wizard နဲ့ကြိုးစားကြည့်လိုက်ပါ အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုရင်တော့ Device change ရတော့မှာပါ
Hardware settings ကို change လိုက်ပါ ပြီးရင် Resources tab ကိုသွားပြီး
Troubleshooting wizard နဲ့ကြိုးစားကြည့်လိုက်ပါ အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့
သင့်ရဲ့ BIOS မှာ IRQ settings ကိုဘယ်လိုပြန်လည်စီစဉ် ထားသလဲဆိုတာစစ်ဆေးကြည့်ပါ ပြီးရင် Troubleshoot !!!
Driver ကို Uninstall, Reinstall လုပ်လိုက်ပါ ပြီးရင် Troubleshoot!!! တကယ်လို့ device က non-plug-and-play ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် အောက်ပါအတိုင်းလုပ်ဆောင် ပေးရပါဦးမယ်
Posted by ဧရာညီနောင် at 6:39 AM